KMF/Cnoe: “Tsy mbola tsara hanaovana vato fotsy izao” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Tsy mbola tsara hanaovana vato fotsy izao”
Adidy fa tsy didy ny mifidy. “Tsy mbola tsara hanaovana vato fotsy izao”, hoy ny KMF/Cnoe.
“Raha amin’izao, tsy voararan’ny lalàna ny manao vato fotsy sy ny mitaona ny olona hanao vato fotsy. Tsy mbola tsara aloha izany amin’izao. Raha misy izany ny hetsika ho amin’ny fanaovana vato fotsy, zon’izy ireo tanteraka izay. Te hiteny amin-dry zareo ny KMF/Cnoe hoe: amin’ny hetsika vato fotsy, tokony hatao an-tery na tsy maintsy atao ny fandehanana mifidy ary voasazy izay tsy mifidy.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, manoloana ny hetsika fitaomana ireo tsy nifidy hanao vato fotsy amin’izao fihodinana faharoa izao. Raha izay hoe an-tery izay no voalazan’ny lalàm-pifidianana amin’ny fandehanana mifidy, mety ny fanaovana vato fotsy.
Mila hamboarina ny lalàm-pifidianana
Amin’izao fotoana izao: mitovy ihany fa tsy misy dikany na tsy mifidy ny tena, na manao vato fotsy na maty. Ny vato manankery ihany no manankery, fa izay no voalazan’ny lalàna. Mandringa izany ny fanaovana vato fotsy, satria mitovy amin’ny fitaomana olona tsy hifidy ihany: zon’ny olona koa ny tsy mifidy.
Tsy miova ny lanjan’ny vato fotsy sy ny vato maty ary ny tsy mandeha mifidy, raha amin’izao lalàm-pifidianana izao no mitaona olona tsy hifidy na hanao vato fotsy. Mety raha ohatra ka hoe handeha hanao vato fotsy, fa miova ny lalàna: tsy maintsy mifidy avokoa ny olom-pirenena, ary ao anatin’ny tahan’ny mpifidy ny olom-pirenena rehetra. Azo atao ary mety tsara ny fanomezan-danja ny vato fotsy amin’izany.
Amin’izay fotoana izay, na 10% fotsiny aza ny vato fotsy, tokony handini-tena ny mpitondra fanjakana. Vao mainka fa tafakatra 40% any ho any, ohatra, izany: efa tokony hofoanana tanteraka ny fifidianana.